बाल्यकालमा यस्तो गोलू-मोलू थिइन् सारा, हेर्नुहोस् केहि तस्विर !
जेठ २४, २०७८ SLP
बलिउड अभिनेता सैफ अली खान र अमृता सिंहको प्यारी छोरी सारा अली खानलाई नचिन्ने कमै होलान्। साराले फिल्म ‘केदारनाथ’ बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। अभिनेत्रीले पहिलो फिल्मबाट नै फ्यानको मन जित्न सफल भएकी थिइन्। यस फिल्ममा साराले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतसँग काम गरेकी थिइन्।
अभिनयको साथसाथै सारा आफ्नो मायालु प्रवृत्तिको कारण फ्यानबीच छाईरहन्छिन्। सारा प्राय सामाजिक सञ्जालमा फ्यानसँग जोडिरहन्छिन्। यसैबीच साराको एक फोटो इन्टरनेटमा भाइरल भईरहेको छ।
सो फोटो उनको बाल्यकालको हो। यस फोटोमा साराकी फूपुले सजहा सार्वजनिक गरेकी हुन्। फोटोमा सारा आमाको काखमा मुस्कुराईरहेकी छन्। फोटोमा देखेर सारा बाल्यकालमा गोलु थिईन् भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस फोटोमा साराको अनुहारमा निर्दोषपन अझै पनि उनको अनुहारमा देख्न सकिन्छ। साराको यो फोटो साझा गर्दै सबाले लेखिन्- ‘आमाको लागि उसको वातावरण नै उनको बच्चा हो।’
यसका साथै उनले सारा र अमृता सिंहको ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरेकी छन्। सारा अली खान आफ्नो आमाको निकै नजिक छिन्। उनी आफ्नो पिताभन्दा पनि आमसँग धेरै समय बिताउँछिन्। यधपी सारा आफ्नो आअमबुबा दुवैसँग बराबरको सम्बन्ध बनाईराख्छिन्। उनको सम्बन्ध सौतेला आमा करीनासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको छ।
कामको कुरा गर्ने हो भने साराले डेविड धवनको फिल्म ‘कुली नंबर १ ‘ मा काम गरेकी थिइन्। यस फिल्ममा वरुण धवन हिरो थिए। यस फिल्मलाई दर्शकले खासै मन पराएका थिएनन्। सारा छिट्टै फिल्म ‘अतरंगी रे’ मा काम गर्दैछिन्। यस फिल्ममा अक्षय कुमार र धनुष पनि छन्।
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २४, २०७८०९:२४
शेफाली जरीवालाले पुलमा गरिन बोल्ड फोटोशुट, तातियो सामाजिक संजाल ! [तस्विर सहित]